अन्तरिक्ष यात्रा गराउँदै चीन, २०२५ सम्ममा अन्तरिक्ष पर्यटक लैजाँदै - Janadesh Khabar
अन्तरिक्ष यात्रा गराउँदै चीन, २०२५ सम्ममा अन्तरिक्ष पर्यटक लैजाँदै
जनादेश खबर	काठमाडौं	माघ २०, २०७८
आगामी तीन वर्षमा चिनियाँ अन्तरिक्षयानमा बसेर मानिसहरु पर्यटकको रुपमा अन्तरिक्षको भ्रमणमा जान सक्नेछन् । चीनको एक अन्तरिक्ष यातायात कम्पनीले पंखायुक्त रकेट बनाइरहेको छ । जसबाट अन्तरिक्ष पर्यटनलाई बढावा मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ । अन्तरिक्षको यो यात्रा एक निश्चित स्थानबाट अर्को निश्चित स्थानसम्म हुनेछ ।
चिनियाँ कम्पनीले एउटा निकै तीव्र गतिमा उड्ने रकेड बनाइरहेको छ । जसमा पंखा हुनेछन् । यो एक विन्दुबाट अर्को विन्दुसम्म हुने उडानका लागि रहनेछ । स्याटेलाईट प्रक्षेपण गर्ने संसारका अन्य रकेटको तुलनामा यो सस्तो हुनेछ । यो कुनै पनि सामान्य जहाजभन्दा तीव्र गतिमा उड्नेछ ।
चीनको यो स्पेस यान पृथ्वीदेखि अन्तरिक्षसम्मको दुई विन्दुबीचमा यात्रा गर्नेछ । यो रकेटलाई र्यापिड ट्रान्सपोर्टको रुपमा उपयोग गरिनेछ र पूर्णरुपमा पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिनेछ ।
स्पेस ट्रान्सपोर्टेसन वेबसाइटमा रहेको भिडियो प्रस्तुति अनुसार यो यानलाई निकै महत्वाकांक्षी परियोजना मानिएको छ । एनिमेटेड प्रस्तुतीमा मानिसहरू रकेटभित्र बसिरहेका र उक्त रकेटले सिधै माथि उडान भरेको देखाइएको छ ।
यो अन्तरिक्ष यानमा रकेट पावर्ड पंखा हुनेछन् । यो यान चीनबाट उडेर सिधै अन्तरिक्षमा पुग्नेछ र त्यहाँबाट सिधै दुबईमा अवतरण गर्नेछ । यसको अवतरण पनि सिधै ठाडो अर्थात् भर्टिकल हुनेछ । यो पछाडिको भागमा रहेको तीन वटा खुट्टामा अवतरण गर्नेछ ।
यो रकेट बनाउने कम्पनी बेइजिङ लिंगकंग तियानजिङ टेक्नोलोजी लिमिटेड हो । आगामी वर्षदेखि यो अन्तरिक्ष रकेटको परिक्षण सुरु गर्ने योजना कम्पनीको छ । त्यस्तै सन् २०२४ मा यसको पहिलो उडान हुनेछ भने मानवयुक्त पहिलो उडान चाहिँ सन् २०२५ मा सुरु हुनेछ ।
त्यसपछि सन् २०३० मा एक विश्वव्यापी, अर्बिटल तथा यात्रुयुक्त अन्तरिक्ष उडानको पनि योजना छ ।
यो कम्पनीको स्थापना सन् २०१८ मा भएको थियो । अन्तरिक्ष पर्यटनको आफ्नो योजना तय गर्न पर्याप्त समय लगाइएको भन्दै कम्पनीले अघिल्लो वर्ष यसका लागि चार करोड ६३ लाख डलर कोष जम्मा गरेको थियो ।
कम्पनीले तियानजिङ १ र तियानजिङ २ गरी दुईवटा हाइपरसोनिक स्पेस प्लेन पनि बनाएको छ । यी जहाजको १०औँ परिक्षण उडान गत जनवरी २३ मा गरिएको थियो ।
स्मरण रहोस् अहिले विश्व अन्तरिक्ष पर्यटनको दौड सुरु भैसकेको छ । भर्जिन ग्यालेक्टिक कम्पनीले गत वर्षको जुलाइमै पहिलोपटक कम्पनीका प्रमुख रिचार्ड ब्रान्सनसहितका यात्रुहरुलाई आफ्नो यानमा राखेर अन्तरिक्ष यात्रा गराइसकेको छ । त्यस्तै जुलाइमै जेफ बेजोसको कम्पनी ब्लु ओरिजिनले पनि बेजोस सहितका यात्रुलाई अन्तरिक्षमा लगिसकेको छ । र त्यसयता पनि अन्तरिक्षयात्रा गराइसकेको छ ।
२० माघ २०७८, बिहीवार २३:५१ बजे प्रकाशित
लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र
के हो डार्क वेब ? कसरी भयो शुरूवात ?
यसरी लक गर्नुहोस् आफ्नो फेसबुक प्रोफाइल
अन्तरिक्षमा उत्कृष्ट खानपिनको आइडिया पेश गर्नेलाई १० लाख डलर पुरस्कार
जिमेलमा परिवर्तन, अब इमेल, च्याट, मिट र स्पेस एकैठाउँमा
फेसबुकको माउ कम्पनी मेटाको शेयरमा भारी गिरावट
के हो एनएफटी ? कसरी काम गर्छ ?
फेसबुकको क्रिप्टोकरेन्सी २२ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री हुँदै